एकल पब्लिसिटी दौडधुपमा निर्माता
सिनेमा रिलिजको छेकोमा कलाकार मात्रै होईन्, निर्माण टिमका अन्य सदस्यहरुको नै साथ नपाउँदाको पीडा कस्तो होला । यो कुरा बुझ्न अन्त कतै जानु पर्दैन्, पौष १८ मा रिलिज हुने सिनेमा ‘माई प्रमिस’का निर्माता रमेशकुमार चन्द्रसँग नै छ ।
सिनेमाको रिलिज मिति नजिकिँदै गर्दा उनी सिनेमा पब्लिसिटीमा एकल दौडधुपमा छन् । । तर अन्य दुई निर्माता टंक लिम्बु र नरकुमार लिम्बु कहाँ के गरिरहेका छन ? उनीहरुलाई आफ्नो फिल्म पौष १८ मा रिलिज हुने कुरा थाहा छ कि छैन ? यसमा समेत शंका छ ।
फिल्म निर्माण भनेको एउटा ब्यवसाय नै हो । लाखौ रुपैँया फिल्ममा लगानी गरिसकेपछि केहि न केहि नाफा होस भन्ने चाहना कसको हुदैन र ? तर हाम्रो फिल्म उद्योगमा केहि यस्ता निर्माता पनि छन जो फिल्म निर्माण गर्छन तर प्रदर्शन गर्न जाँगर देखाउदैनन ।
निर्माता रहेका नरकुमार लिम्बु सिनेमाका मुख्य कलाकर समेत हुन । तर उनले निर्माता तथा कलाकर दुबै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सिनेमालाई पुर्णतः बेवास्ता गरेको बुझ्न सकिन्छ । किनकी यदी उनलाई चासो भएको र आफ्नो सिनेमाप्रति माया भएको भए पक्का पनि प्रचार प्रसारमा हिँड्थे होला ।
निर्माता तथा नायक राईले यो बारेमा सबै कुरा मिडियामाझ खोल्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । सिनेमाको प्रचारमा एक्लै हिँड्नुपर्दाको पीडा र रिस अब रोकेर नबस्ने मनसायमा उनी पुगेको हुनुपर्छ । त्यस्तै अर्की कलाकार केकी अधिकारी पनि सिनेमाको प्रचारमा देखिएकी छैनन् । त्यसो त उनी केहि दिन पहिलेको प्रेस मिट मा पनि उपस्थित थिईनन् । भने निर्देशक सुरजसुब्बा नाल्बो पनि मनदेखी लागेको भान बाहिर देखिन्न् ।
जे होस, लाखौँ लगानी गरेर अनि आफ्नै अभिनय समेटिएक सिनेमालाई बेवास्ता गर्नु दुःखद कुरा हो । तर जे जस्तो होस, एकल पब्लिसिटीमा खटिएका रमेशको अभियानले सार्थकता पाओस, सिनेमा दर्शकको मन-मनमा बसोस् हाम्रो सुभकामना छ ।
एकल एल्बम ‘प्रेमको भिखारी’ मार्फत आए गायक गगन सरगम
अल बिदा : बोगटी बा
‘न्यू आउट लेट’को उद्घाटन गरे अनुपबिक्रम शाहीले